PCLinuxOS 2019.06 inosvika neKernel 5.1 uye zvimwe zvinogadziridza | Kubva kuLinux
PCLinuxOS 2019.06 inosvika neKernel 5.1 uye zvimwe zvinogadziridzwa
Munguva pfupi yapfuura iyo nyowani vhezheni yeLinux yekuparadzira PCLinuxOS 2019.06 yakaburitswa, iyo yakauya ingori yekuvandudza kune izvo zvikamu zvehurongwa. Izvi ndezvekuti vashandisi vatsva havafanirwe kurodha nhamba hombe yemamwe mapakeji kunyangwe vatove vatora pasi iyo system mufananidzo.
PCLinuxOS Iko kugoverwa kweLinux uko kwakambotora hwaro hweMandriva Linux, asi gare gare kwakabatanidzwa kuita chirongwa chakasiyana.
PCLinuxOS inosiyana pakushandisa iyo Debian GNU / Linux APT package management toolkit yakabatana neRPM package maneja, iri yekirasi yekuparadzira nhare uko kunatsurudzwa kwepakeji uye mushandisi anokwanisa Kuwana izvo zvazvino vhezheni yesoftware asina kumirira.
Iyo PCLinuxOS repository ine yakatenderedza 14,000 mapakeji.
Kunze kwazvo PCLinuxOS ine script inonzi mylivecd, iyo inobvumidza mushandisi kutora 'snapshot' yekuiswa kwavo yazvino masisitimu (ese marongero, kunyorera, zvinyorwa, nezvimwewo) uye kumanikidza kuti ive CD, DVD kana USB ISO mufananidzo.
Izvi zvinobvumira mushandisi kuita backup nyore yedhata yemushandisi uye zvakare inoita kuti zvive nyore kugadzira yako yega tsika LiveCD, DVD kana USB.
Yekumberi yekurangarira chirwere chishandiso chakabatanidzwa zvakare mubhuti menyu, ichibvumira vashandisi vepamberi kuti vachinje kernel parameter, madhiraivha, uye vashandise yakachengeteka giraidhi modhi kana yavo vhidhiyo kadhi isina kutsigirwa.
Kunyangwe muPCLinuxOS Tinogona kuona kuti KDE ndiyo desktop mamiriro ehurongwa, kune imwezve imwe nzira iri Mate. Saka vashandisi vatsva vanogona kusarudza kuti votora iyo system mufananidzo ne KDE kana Mate.
Pamusoro pezvo, kana iwe usingade nharaunda idzi, iwe unofanirwa kuziva kuti zvakasiyana, nharaunda iriko mukuparadzirwa kweLinux iyi inovandudza vhezheni nedzimwe nharaunda dze desktop. Nharaunda-inogadzirwa inovakwa yakavakirwa paXfce, MATE, LXQt, LXDE, uye Utatu desktops.
1 Chii chitsva muPCLinuxOS 2019.06?
2 Dhawunirodha uye tora PCLinuxOS 2019.06
Chii chitsva muPCLinuxOS 2019.06?
Nekusunungurwa kweiyi nyowani vhezheni yePCLinuxOS 2019.06 Sezvatakambotaura pakutanga, iwo mavhezheni akagadziridzwa eakawanda emapakeji esisitimu anosvika.
Kubva pane izvi tinogona kusimbisa iyo nyowani vhezheni yeLinux kernel 5.1 iyo inowedzera akasiyana optimizations uye pamusoro pese kutsigira kwezvimwe zvinhu zveiyo system.
Kune rimwe divi, izvo zvinoshandiswa zvakagadziridzwa, tinogona kuwana zvitsva zveesystem desktop nharaunda KDE 19.04.2, KDE Zvimiro 5.59.0, uye KDE Plasma 5.16.0.
Iyo yekutanga package inosanganisira kunyorera se Timeshift Backup Utility, Bitwarden Password Manager, Darktable Photo Processing System, GIMP Image Editor, Digikam Image Collection Management System, Megasync Cloud Data Synchronization Utility, Teamviewer remote access control system, Rambox application management system, Simplenotes chinyorwa-kutora software, Kodi media centre, Caliber e-book reader interface, Skrooge financial package, Firefox browser, email email yeThunderbird, mutambi wemimhanzi weStrawberry Spruce uye VLC player yevhidhiyo.
Dhawunirodha uye tora PCLinuxOS 2019.06
Kana usiri mushandisi wekugovera uye uchida kuishandisa pakombuta yako kana kuyedza mumushini chaiwo.
Unogona kuwana iyo system mufananidzo, Iwe chete unofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeiyo projekiti kwaunogona kuwana zvinongedzo muchikamu chayo chekurodha pasi.
Icho chinongedzo chinotevera.
Mifananidzo yesystem yaunowana yakagadzirirwa kushandiswa muhupenyu mode, asi zvakare inotsigira kuisirwa pane rakaomarara diski.
Iyo yakazara (1.8 GB) uye yakadzikiswa (916 MB) shanduro dzekuparadzira dzinoenderana neiyo KDE desktop nharaunda dzakagadzirira kurodha pasi.
Iwe unogona kusevha iyo system mufananidzo kune USB chishandiso nerubatsiro rweEtcher inova iyo multiplatform chishandiso kana iwe unogona zvakare kusarudza unetbootin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » PCLinuxOS 2019.06 inosvika neKernel 5.1 uye zvimwe zvinogadziridzwa
Vhidhiyo Downloader, iko kunyorera kurodha YouTube mavhidhiyo nenzira yakapusa
RHEL8: iyo nyowani distro yezvino bhizinesi